May 2008 - Knowledge is Free
Computer အသုံးပြုသူတစ်ဦးအနေနဲ့ တစ်နေ့နေ့၊ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မလွဲမသွေကြုံတွေ့ရမှာက Computer ပျက်စီးမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဟာ အသုံးချခံ Electronic Device တစ်ခုသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ပျက်စီးမှုဟာ အထူးအထွေ အံ့သြစရာ မရှိပါ။ ပျက်စီးမှုကြုံတွေ့လာရင် ကျော်လွှားနိုင်ဖို့ ပြုပြင်မှု အတတ်ပညာကို မဖြစ်မနေ တတ်မြောက်ထားဖို့ အရေးကြီးတဲ့ ခေတ်ကာလကို ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Computer ပျက်စီးမှု (၂)မျိုးသာ ရှိပါတယ်..။ ၎င်းတို့မှာ-
(2) Software ပျက်စီးမှုတို့ ဖြစ်ပါတယ်..။
Hardware ပျက်စီးမှုဟာ အကြောင်းမျိုးစုံ ရှိပါတယ်။ Electronic Devices များသာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မူလစက်ရုံ မှ ထုတ်လုပ်စဉ်ကတည်းက ပါရှိလာတဲ့ အပြစ်ကြောင့် ပျက်တာလား၊ အသုံးပြုတဲ့ သက်တမ်း ကြာလာလို့ ပျက် တာလား၊ အသုံးပြုတဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မတည်ငြိမ်မှုကြောင့် ပျက်တာလား၊ အသုံးပြုသူရဲ့ အမှားအယွင်း ကြောင့် ပျက်စီးတာလား စသည်ဖြင့် မျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Computer မှာ အသုံးပြုတဲ့ Software ကို (၂)မျိုး ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ-
(2) Application Software ဆိုပြီး (၂)မျိုးရှိပါတယ်..။
ကွန်ပျူတာ စတင်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့ Operating System တစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ Operating System တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..။ ၎င်းတို့မှာ-
(1) DOS 6.22
(2) Windows 3.1
(3) Windows 95
(4) Windows 98
(5) Windows ME
(6) Windows XP
(7) Windows NT
(8) Windows 2000 တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်..။
Windows 3.1 ဟာ Operating System မဟုတ်ပါ။ DOS 6.22 မှာ မှီပြီး အသုံးပြုရတဲ့ Application Software တစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန် Windows အားလုံးဟာ Operating System တွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Windows NT နဲ့ Windows 2000 တို့ဟာ Network Version များ ဖြစ်ကြပါတယ်။
Word, Excel, PageMaker တို့လို Software တွေဟာ Application Software တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Computer အသုံးပြုမှု ကျယ်ပြန့်လာတာနဲ့အမျှ Application Software တွေ ပြဿနာပေါ်ရင် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသူ Computer ၀ါသနာရှင်များကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Windows XP မှာ ပြဿနာ ပေါ်ရင် Computer အသုံးပြုသူတွေဟာ ကိုယ်တိုင် Installation လုပ်ဖို့ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Windows XP ပျက်တဲ့အခါ အလွယ်ကူဆုံး ထည့်နိုင်ဖို့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Clean Installation ဖြစ်ပါတယ်။ Hard Disk အသစ်ကို Windows XP Installation လုပ်ခြင်းနဲ့အတူ Partition ပိုင်းခြင်း၊ Format လုပ်ခြင်းတို့ တစ်ခါတည်း လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hard Disk အသစ်မဟုတ်ပဲ Hard Disk အဟောင်းပေါ်မှာ Installation လုပ်ရင် Format လုပ်ပြီးထည့်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Data တွေ ပျက်စီးနိုင်တာကို ကြိုတင်သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Partition ပိုင်းတာက အစ စီမံကိန်းချပြီး သတိရှိရှိနဲ့ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hard Disk ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ Partition အရင် ပိုင်းရပါမယ်။ Partition ကို FAT32 နဲ့ ပိုင်းမှာလား၊ NTFS နဲ့ ပိုင်းမှာလား၊ ကြိတင်စဉ်းစားရပါတယ်။ Windows OS ဘယ်နှစ်မျိုး အသုံးပြုမှာလဲဆိုတာ ကြိုတင် စဉ်းစားရပါတယ်။ Windows 98 ကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် FAT32 ကို အသုံးပြုရပါမယ်။ Windows XP ကို FAT32 (သို့) NTFS နှစ်မျိုးစလုံးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Windows OS နှစ်မျိုးစလုံး အသုံးပြုမှာဆိုရင် အနည်း ဆုံး Partition နှစ်ခုပိုင်းရင် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
အခု ပြောပြမယ့် ကွန်ပျူတာရဲ့ Partition ကို NTFS နဲ့ ပိုင်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Windows 98, Windows ME တို့ ထည့်သွင်းလို့ မရတာကို သတိပြုရပါမယ်..။
Windows XP တစ်မျိုးတည်းထည့်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Partition တစ်ပိုင်းတည်းထားရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့သော် Windows XP ပြဿနာပေါ်ခဲ့ရင် အမြန်ဆုံး၊ အလွယ်ကူဆုံးထည့်တဲ့နည်းလမ်းဟာ Clean Installation ဖြစ်ပါတယ်။ Clean Installation နဲ့အတူ Format လုပ်ပြီးထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Partition တစ်ပိုင်းတည်းထား မှာဆိုရင် Format လုပ်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းမှာ Data တွေ ပျက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် PageMaker တို့နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ Documents Files တွေ၊ အသံပိုင်းဆိုင်ရာ Files တွေ၊ Video ပိုင်းဆိုင်ရာ Data တွေကို ဒုတိယ Partition မှာ သိမ်းထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Data တွေကို Partition အလိုက် ခွဲပြီးသိမ်းချင်ရင် Partition ကို နှစ်ခု ထက်ပိုပြီး ပိုင်းနိုင်ပါတယ်။
Partition နှစ်ပိုင်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မိမိ Computer ထဲမှာ Drive Letter "C:" နဲ့ Drive "D:" တို့ကို တွေ့ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ထည့်မယ့် Windows XP ကို Drive "C:" ထဲမှာ ထည့်မှာလား၊ Drive "D:" ထဲမှာ ထည့် မှာလား၊ ကြိုတင်စဉ်းစားထားဖို့ လိုပါတယ်။ Operating System ဟာ Windows XP တစ်မျိုးတည်းသာ အသုံးပြု မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows XP ကို Drive "C:" မှာ ထည့်သွင်းရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ Data တွေ အား လုံးကို Drive "D:" ထဲမှာ သိမ်းထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Windows XP Installation (၂) မျိုးရှိပါတယ်။
(1) Full Version Installation
(2) Upgrade Installation တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Full Version Installation (၂)မျိုး ရှိပါတယ်။
(1) Clean Installation
(2) Command Prompt Installation တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ Hard Disk အသစ်ကို Installation လုပ်တဲ့နည်းလမ်း နဲ့ High Level Format လုပ်ပြီးမှ ထည့်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို Clean Installation လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Windows ကို Install or Upgrade မလုပ်ခင် လုပ်ရမဲ့အချက်တွေကို အရင်လေ့လာပါမယ်။
(၁) ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုမယ့် Windows ဟာ ဘယ်လို Computer (CPU, RAM, HDD) အနည်း ဆုံးရှိဖို့ လိုအပ်သလဲ။ ဒါကို Hardware Requirement လို့ ခေါ်ပါတယ်။
(၂) ကိုယ်သုံးမယ့် Windows နဲ့သုံးထားတဲ့ Hardware ဟာ အပ်စပ်ရဲ့လား။ ဆီလျှော်ရဲ့လား။ ဒါကို Hardware & Software Compatibility လို့ ခေါ်ပါတယ်။
(၃) အစ, အဆုံး Install ပြန်လုပ်မှာလား။ Clean Install ဒါမှမဟုတ် ရှိပြီးသားကို Upgrade လုပ်မှာလား။
(၄) Data ကို Backup လုပ်ဖို့လိုအပ်ရင် ဘယ်လို Backup လုပ်လို့ ဘယ်လိုပြန်ခေါ်ကြမလဲ။ ဒါလည်း စဉ်းစား စီစဉ်ရမယ်။
(၅) Install လုပ်တဲ့အခါ ဘယ်လိုဘယ်ပုံ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ရွေးချယ်ရမယ့် အဆင့်ဆင့်။
(၆) Hard Disk ကို တစ်ပိုင်းတည်းပဲထားမှာလား။ C: တွေ၊ D: တွေ ခွဲအုံးမှာလား။ File System က ဘာသုံး မှာလဲ။
(၇) Windows တင်တာတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒီ Computer က Network ချိတ်အုံးမှာလား။
(၈) Computer မှာ Windows ကို English လား၊ German လား၊ Language ရွေးပေးပါ။ ဒီရွေးပေးတဲ့ပေါ် မူတည်ပြီး Currency တို့၊ Keyboard Layout တို့ ပြောင်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၉) Install လုပ်ပြီးသွားရင် လုပ်ရမယ့်အချက်များစုဆောင်းပါ စသည်ဖြင့် အချက်(၉)ချက်နဲ့ လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
Entering Setup Program
System BIOS သည် power on self test (Post) လုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ CMOS setup program ကို access လုပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။ Computer power စဖွင့်ပြီး မကြာခင် System memory ကို စစ်ဆေးနေစဉ် အတွင်း setup ထဲသို့ ၀င်ရောက်ရန်အတွက် key တစ်ခုခုကို နှိပ်ပါဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်ပါဝင်သော message ကို screen ပေါ်တွင် တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
AMI ၊ Award နှင့် အခြားအသုံးများသော BIOS များတွင် Delete Key သည် Setup အတွင်း ၀င်ရောက်ရန် Standard key ဖြစ်ပြီး အချို့သော BIOS များမှာတော့ F1 ၊ F2 ၊ F10 ၊ Esc ၊ အစရှိသော Key များကို နှိပ်ပြီး ၀င်ရောက်ရပါတယ်။ Memory Test လုပ်နေစဉ်အတွင်း ညွှန်ကြားထားတဲ့ Key (ဥပမာ Del ) ကို နှိပ်မယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်စရာ Menu များစွာပါရှိသော BIOS setup program ရဲ့ Interface ကို မြင်ရပါမယ်။ ထို Interface သည် BIOS အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီး မတူညီပဲ ကွဲပြားကြပါတယ်။
AMI - F1, Del, Ctrl+S
AST - Ctrl+Alt+Esc
Award - F1, F2, Del, Ctrl+Alt+Enter
Phoenix - F2, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+R, Ctrl+Alt+Ins, Ctrl+Alt+Q, Ctrl+Alt+F1, Ctrl+Alt+(+), Ctrl+Alt+(-)
IBM - PS1 Ctrl+Alt+I အစရှိသည်ဖြင့် ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
Motherboard Manual ထဲတွင် ထို Setup Program ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်များ ပါရှိပါတယ်။ Setting တစ်ခုခုကို ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် အလွန်သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ အကယ်၍ အရေးကြီး Setting တစ်ခုခုကို မှားယွင်းပြောင်းလဲခဲ့မိပါက စက်မတက်သည့် ပြဿနာမျိုး ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် setting တစ်ခုခုကို ပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် မပြောင်းခင်မှာ နဂိုရှိပြီးသား CMOS setting များကို စာရွက်ပေါ်မှာ ဖြစ်ဖြစ် ရေးချမှတ်သားထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ယခုဆက်လက်ပြီးတော့ System BIOS ၏ လုပ်ဆောင်ပုံများကို ပိုမိုသဘောပေါက် နားလည်စေရန်အတွက် computer power စဖွင့်ချိန်မှစ၍ Operating System စတင်သည့်ကြားကာလအတွင်း BIOS မှ လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်တို့ကို အနည်းငယ် ထပ်မံရှင်းပြလိုပါတယ်။
When Power is applied to the computer
Computer Power ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ Power Supply သည် မိမိအတွင်းပိုင်းမှာ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပြီး အောင်မြင်ပါက Power Good Signal ကို ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ Motherboard ပေါ်ရှိ Processor Timer Chip သည် ထို Power Good Signal ကို ရရှိမှသာလျှင် Processor reset လုပ်ထားခြင်းကို ရပ်ဆိုင်း လိုက်ပြီး စတင်အလုပ်လုပ်စေပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် power ဖွင့်ချိန်မှစပြီး power good စတင်ထုတ်ပေးချိန် ထိ ၁ စက္ကန့်မှ ၅ စက္ကန့်အတွင်း ကြာမြင့်လေ့ရှိပါတယ်။
Computer ထဲကို Hard Disk အသစ် တပ်ဆင်ပြီးတဲ့အခါ Auto Detect Hard Disk လုပ်ပေးရပါတယ်။ Pentium III, P4 Computer တွေမှာ Auto Detect Hard Disk အပိုင်းဟာ သီးသန့်လုပ်ဆောင်ပေးစရာ မလိုပါ။ CMOS Setup က တပ်ဆင်ထားတဲ့ Hard Disk ကို Auto ရှာဖွေပြီး၊ Cylinder, Head, Sector တန်ဖိုးတွေကို ဖြည့်ပေးပါတယ်။ Model နိမ့်တဲ့ PI, PII Computer တွေမှာတော့ Auto Detect Hard Disk ကို မဖြစ်မနေ လုပ် ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
(၁) Computer ဖွင့်စ Post လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Del Key ကိုနှိပ်ပြီး CMOS setup ထဲကို ၀င်ရပါတယ်။
Press DEL to run Setup ဆိုပြီး CMOS setup ထဲကို ၀င်ချင်ရင် Del Key ကိုနှိပ်ပြီး ၀င်ဖို့ ပြော နေတာကို Monitor ရဲ့အောက်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
(၂) Hard Disk အသစ်တပ်ဆင်တိုင်း Auto Detect Hard Disk လုပ်ရပါမယ်။ ယခု computer ဟာ P4 ဖြစ်တဲ့ အတွက် Auto Detect ကို သီးသန့်လုပ်ဖို့ မလိုအပ်ပါ။
(၃) Auto Detect လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Advanced BIOS Feature Setup ထဲကို ၀င်လိုက်ရပါတယ်။
BIOS အတွက် အရေးကြီးသောသီးခြား ရွေးချယ်မှု Navigation Options များမှာ-
- အပေါ်၊ အောက် Highlight Scroll ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ရန်အတွက် UP and Down Arrow Key များကို နှိပ်၍ ရွေးချယ်ခြင်း၊ (သို့မဟုတ်) Page Up or Page Down Key ကို နှိပ်ခြင်း။
- Select လုပ်ထားသော Option ကို ၀င်ရောက်ရန်အတွက် Enter Key ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း။
- ပြန်ထွက်ရန်အတွက် Esc Key ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း။
- Save လုပ်ပြီးပြန်ထွက်ရန်အတွက် F10 Key ကို ရွေးချယ်ခြင်း စသည်ဖြင့် ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
(၃) Boot Sequence ကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပါတယ်။
အချို့သော Boot Sequence များမှာ HDD-0 ဟာ Hard Disk ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ တစ်ခါတရံ IDE-0 လို့လည်း ဖော်ပြတတ်ပါတယ်။
(၄) ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း 1st Boot Device = 1st FLOPPY DRIVE ပေါ်မှာ Highlight ထားပြီး၊ Floppy မှ CD-ROM ကိုပြောင်းရန် Key (or) Key ကို နှိပ်ရ ပါတယ်။ CD-ROM နှင့် Boot လုပ်၍ Windows တင်ရန်အတွက် First Boot Device နေရာတွင် CD-ROM ဖြစ်စေရန် ပြောင်းထားပေးပါ။ Second Boot မှာ HDD-0 မဖြစ်မနေရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ Windows XP ကို CD-ROM Drive ထဲထည့်ပြီး CMOS Setup ထဲ မှာ Boot Sequence မှာ CD-ROM ကို First Boot Device အဖြစ် ထားလိုက်ပါတယ်။
(၅) Boot Sequence ရဲ့ First Boot မှာ CD-ROM ကို ရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါ Key ကိုနှိပ်ပြီး Main Menu ကို သွားလိုက်ပါတယ်။ Save လုပ်ရန်အတွက် Key ကို နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ ထိုအခါ ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း Save to CMOS and EXIT (Y or N) y လို့မေးတဲ့အခါ "Y" Key ကိုနှိပ်ပြီး Enter Key ကို ခေါက်လိုက်ပါ။ CMOS Setup မှာ ပြောင်းလဲထားတဲ့အချက်တွေကို Save လုပ်ပြီး Reboot ပြန်လုပ်တာ တွေ့ရပါတယ်။ CMOS က Save လုပ်ပြီး ထွက်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအခါ အောက်ပါအတိုင်း CD-Drive မှ Boot လုပ်ရန်အတွက် နှစ်သက်ရာ Key တစ်ခုခုကို နှိပ်ရန် ညွှန်ကြား ချက်တစ်ခု ထပ်မံပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ညွှန်ကြားချက်မှ ရှေ့ဆက်သွားရန် "Enter" ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
ထိုအခါ အောက်ပါအတိုင်း Windows Files များကို Copy ကူးပြီးလို့ Restart လုပ်ပြီးရင် CD နဲ့ Boot လုပ်စရာ မလိုပါ။ ဒါကြောင့် "Press any key to boot from CD." ဆိုတဲ့ စာပေါ်လာရင် မည်သည့် Key မှ နှိပ်ပေးရန် မလိုအပ်ပါ။
ပြီးသော် အောက်တွင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Welcome Setup ကို တွေ့ရပါမယ်။ Enter ခေါက်ရင် Continue, Repair လုပ်ချင်ရင် R ကို နှိပ်ပါ၊ ပြန်ထွက်ရန် F3 ကို နှိပ်ပါဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်မှ ရှေ့ဆက်သွားရန် "Enter" ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
ထိုအခါ အောက်ဘက်တွင် တွေ့ရသည့်အတိုင်း License Agreement မေးနေတဲ့အတွက် သဘောတူညီ ကြောင်း "F8" Key ကို နှိပ်လိုက်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း ရှေ့ဆက်သွားရန် "Enter" Key ကို ခေါက်လိုက်ပါ။
ထိုအခါ Windows XP ထည့်သွင်းရန် Drive ရွေးခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း Unpartitioned Space 16379 MB လို့ ပြနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Partition ပိုင်းတဲ့အခါ Create နဲ့ Delete ဆိုတဲ့ Menu နှစ်ခု ကို အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Create ဟာ Partition ပိုင်းလိုတဲ့အခါ အသုံးပြုပြီး၊ Delete ဟာ Partition ဖျက်လိုတဲ့အခါ အသုံးပြုပါတယ်။ Partition မပိုင်းရသေးရင် Create Menu ကိုသာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး Partition ပိုင်းပြီးတဲ့အခါ Delete Menu ပါ ပေါ်လာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Data ရှိတဲ့ Hard Disk ဆိုရင် Partition ကို Delete လုပ်ပြီး ဖျက်လိုက်တာနဲ့ Hard Disk အတွင်းမှာရှိတဲ့ Software နဲ့ Data တွေအားလုံး ပျက်စီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Partition မပိုင်းပဲ တစ်ခုတည်း ထား၍ Install တင်ချင်ရင် "Enter" Key ကို နှိပ်ပါ။ Maximum Size အတိုင်း Partition ခွဲပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Hard Disk ကို Partition ဖန်တီးလိုပါက "C" Key ကို နှိပ်ပါ။ သို့မဟုတ် ပြန်ထွက်လိုပါက "F3" Key ကို နှိပ်ပါဆိုတဲ့ ညွှန်ကြားချက်တစ်ခု ထပ်မံပေါ်လာပါမယ်။ Partition ကို C: နှင့် D: ဆိုပြီး အညီအမျှ (၂)ပိုင်း ပိုင်းထားကာ C: ထဲတွင် Windows နှင့် အခြား Softwares များတင်ရန်နှင့် D: ထဲတွင် Data Backup များပြုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် Create လုပ်ရန် "C" Key ကို နှိပ်လိုက် ပါတယ်။
ပြီးနောက် နှစ်ပိုင်းထားလိုတဲ့အတွက် ပေါ်နေတဲ့ 16379 MB ကို Back Space နှိပ်ပြီး ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ မိမိ ခွဲလို တဲ့ Partition Size ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ ဥပမာ- အညီအမျှ ထားလိုပါက 8190 လို့ ရိုက်ထည့်ပေးခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးသော် "Enter" Key ကို ခေါက်လိုက်ပါ။
ဒုတိယ Partition ပိုင်းရန် Unpartitioned Space ကို ရွေးချယ်ပြီး Create လုပ်ရန် "C" Key ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ ပြီးနောက် "Enter" Key ကို နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ Partition နှစ်ပိုင်းပိုင်းထားပြီးနောက် Windows XP ကို Drive C: နဲ့ Drive D: အနက် နှစ်သက်ရာတစ်ခုခုမှာ ထည့်နိုင်ပါတယ်။ Windows XP ကို Install လုပ်ရန် Drive C: ကို ရွေးချယ်ပြီး "Enter" Key ကို ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
ထိုအခါ အောက်တွင်ပြထားသည့် အတိုင်း Format Partition အပိုင်းကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Partition ခွဲ ပြီးတဲ့အတွက် Format လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Format ရွေးချယ်စရာ (၄)မျိုးကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ NTFS (သို့) FAT နဲ့ပိုင်းမှာလား၊ Quick Format လုပ်မှာလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို တွေ့ရပါတယ်။
Hard Drive က 2GB ထက် ငယ်မယ်ဆိုရင်တော့ FAT နဲ့ Format ချခဲ့မယ်။ 2GB ထက်ကြီးနေမယ် ဆိုရင် တော့ FAT32 ပေါ့။ ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ FAT (FAT16) က မသုံးသလောက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒါကြောင့် FAT32 ကိုပဲ အများဆုံး တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Partition နှစ်ပိုင်းပိုင်းထားပြီး တစ်ပိုင်းကို FAT32 ထားမယ်၊ နောက် တစ်ပိုင်းကို NTFS ထားမယ်ဆိုရင်တော့ FAT32 ကနေ NTFS ကို တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါ။ သုံးလို့ရမှာ မဟုတ်ပါ။
Windows 2000 ရဲ့ NTFS က (NTFS 5) ပါ။ Windows 4.0 ရဲ့ (NTFS 4) ထက် ကောင်းမွန်တဲ့အချက် (သို့) NTFS4က မလုပ်နိုင်သော အချက်အနည်းငယ် ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ အသုံးပြုသူတွေကို Hard Disk Space ကို သူ့ကိုသုံးသလောက်ပဲ ခွဲဝေပေးလို့ရပါတယ်။ Hard Drive ထဲမှာ File and Folder တွေကို Security အတွက် Encrypt လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Windows 2000 ရဲ့ Dynamic Disk Configuration ကို Support လုပ်ပါ တယ်။ သင့်ရဲ့ Computer မှာ Windows System တစ်မျိုးတည်းသာ သုံးမယ်ဆိုရင် NTFS ကို သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Local File Security လည်း ရမယ်လေ။
Quick Format ဟာ Format တစ်ကြိမ်လုပ်ပြီးတဲ့ Partition တွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် "Format the partition using the NTFS file system" ကို ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။
အောက်ဘက်ပုံတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Format လုပ်နေသည်ကို တွေ့ရပါမယ်။ Windows XP ဟာ Drive C: ကိုသာ Format လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ Drive D: ကိုတော့ Windows XP တင်ပြီးတဲ့နောက်မှသာ ကိုယ်တိုင် ပြန်လည်ပြီး Format လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Format လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ Windows XP Files တွေကို CD-ROM ထဲမှ Hard Disk ထဲကို Copy ကူးနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
Copy ကူးယူနေမှု လုပ်ငန်းစဉ်အား အချိန်အနည်းငယ် စောင့်လိုက်ပါ။
ထိုအခါတွင် အောက်ဘက်တွင် ပြထားသည့်အတိုင်း Windows အတွက် လိုအပ်သော Configuration များကို စတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။
လိုအပ်တဲ့ Files တွေကို Copy ကူးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း Restart ပြန်လုပ်နေတာကို တွေ့ရမှာ ပါ။ စောင့်ဆိုင်းရန် စိတ်မရှည်သူများအတွက်ကတော့ "Enter" Key ကို သာနှိပ်လိုက်ပြီး Restart ပြန်လုပ် လိုက်ပါ။
Computer ကို Restart ပြန်လုပ်ပြီးတဲ့အခါ "Press any key to boot from CD....." လို့ ပြနေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ CD-ROM နဲ့ Boot လုပ်စရာမလိုတဲ့အတွက် မည်သည့် Key မှ ထပ်မံပြီးနှိပ်စရာ မလိုတာကိုတော့ အထူးသတိပြုဖို့ လိုပါတယ်။
ပုံတွင် ပြထားသည့်အတိုင်း Windows XP Logo တက်လာပါတယ်။
ထိုအခါ အောက်ဘက်တွင် မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Windows XP ဟာ 39 Minutes ကြာရင် ပြီးဆုံးမှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
အောက်ဘက်တွင် မြင်တွေ့နေရသည့် ပုံမှာ Windows XP Setup မှ လိုအပ်တဲ့ Files များကို Copy ကူးယူနေပုံ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါမြင်တွေ့ရသည့် ပုံအတိုင်း Regional and Language Options ပေါ်လာပြီး၊ Default အတိုင်း ယူမှာ ဖြစ်လို့ Next ပေါ်မှာ Click ခေါက်လိုက်ပါ။
အောက်ပါပုံအတိုင်း Installation လုပ်သူရဲ့ Name နဲ့ Organization ကို တောင်းတဲ့အတွက် Name နဲ့ Organization မှာ နှစ်သက်ရာ အမည်နဲ့ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုခုကို ဖြည့်ပေးလိုက်ပါ။
ဆက်လက်ပြီး ပုံပါအတိုင်း Windows XP ရဲ့ Product Key ကို ထည့်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးနောက် Next ကို Click နှိပ်လိုက်ပါတယ်။
ထိုအခါ အောက်ဘက်တွင် မြင်ရသည့်အတိုင်း Computer Name တောင်းတဲ့အခါ သင်နှစ်သက်ရာ အမည် တစ်ခုခုကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ထို့နောက်တဖန် Passward ထည့်ထားလိုပါက Administrator Passward နဲ့ Confirm Passward ရှိ အကွက်ထဲမှာ သင့်စိတ်ကြိုက် Passward တစ်ခုခုကို တူညီမှုရှိအောင် ထည့်သွင်း ပေးရပါမယ်။
သင့် Computer ရဲ့ Security အတွက် လုံခြုံမှုရှိအောင် Passward ကို ဒီအတိုင်း blank မထားလိုက်ပါနဲ့။ Passward ကောင်းကောင်းလေးတစ်ခုလောက်တော့ ထည့်သွင်းပေးထား စေလိုပါတယ်။ ဥပမာ- ခိုင်မာတဲ့ passward တွေမှာတော့ Letters များ၊ Numbers နဲ့ Symbols များ ပါဝင်ပြီး Dictionary စာအုပ်ထဲမှာ မရှိတဲ့ စကားလုံးတွေ ဖြစ်ရပါမယ်။ ဥပမာ- အောက်ဖော်ပြပါ Passward များကို လေ့လာကြည့်ပါ။
ဆက်လက်ပြီး အောက်ပါပုံအတိုင်း Date and Time Settings ကို မေးပါတယ်။ Next ပေါ်မှာ Click ခေါက်လိုက် ပါ။
ထိုအခါ Network Settings တွေကို မေးလာတဲ့အခါ Typical Settings ကို ရွေးချယ်ပြီး၊ Next ပေါ်မှာ Click ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
အကယ်၍ Workgroup နှင့် Domain Setting များအတွက် ထပ်မံပေါ်လာပါက သူ့နဂိုပါ Default Settings အတိုင်းပင် ထားလိုက်ပါ။ ထို့နောက် Next ကို ထပ်မံ၍ Click ခေါက်လိုက်ပါတယ်။ Network ချိတ်ဆက်ရန် အတွက် computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး Workgroup Name တူညီဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Computer Name ကတော့ စက်တစ်လုံးကို တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Finalizing Installation လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ computer ကို ဒုတိယအကြိမ် Restart ပြန်လုပ်ပါတယ်။ "Press any key to boot from CD....." လို့ ပေါ်လာရင် မည်သည့် Key ကိုမျှ မနှိပ်ရပါ။ (Windows XP CD နဲ့ Boot မလုပ်ရပါ။)
ထိုအခါတွင် အောက်ဘက်ပုံပါအတိုင်း Computer ရဲ့ Screen Resolution ကို ပြောင်းလဲရန် Windows XP က ရှာဖွေပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့် Windows XP က အကြံပေးထားသည့်အတိုင်း Screen Resolution ကို အနည်း ဆုံး 800x600 Setting အနေအထားမှာသာ ထားရှိပေးပါစေ။
ထို့နောက် OK ကို Click ထပ်မံနှိပ်လိုက်ပြီး ဆက်သွားလိုက်ပါတယ်။
Windows XP Logo တက်လာပြီး အောက်ဘက်ပုံတွင် မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း Welcome Screen ပေါ်လာ တဲ့အခါ Next ပေါ်မှာ Click ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
ပြီးနောက် Internet Connection တွေကို မေးတဲ့အခါ Skip ပေါ်မှာ Click ခေါက်ပြီး ကျော်လိုက်ပါတယ်။
ထပ်မံပြီး Computer မှ Internet (သို့) Network ဆီသို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားချက်တစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။ Skip ကို ရွေးချယ်ပြီး Click ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
ထို့နောက် အောက်ပါအတိုင်း Register လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါ "No not at this time" ကို Select လုပ်ပြီး Next ပေါ်မှာ Click ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
Windows ဘယ် Version မဆို computer တစ်လုံးထဲမှာ User အများကြီးကို တစ်ယောက်ချင်းစီ ကိုယ့်စိတ် ကြိုက် Setting နဲ့ ၀င်ရောက်လို့ရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေဖို့အတွက် Windows တက်လာတာနဲ့ Windows ထဲကို ၀င်ဖို့ရာ ဦးစွာ Login လုပ်ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း တစ်ချို့က ကိုယ့်ရဲ့စက်ကို ကိုယ်ပဲသုံးမယ်။ Login Box လည်း မထားဘူး။ Passward လည်း မထားဘူးဆိုရင်တော့ Login လုပ်စရာမလိုပဲ Desktop တန်းပေါ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ပုံပါအတိုင်း Windows XP က သင့် Computer ကို Default User Name အနေနဲ့ ၀င်ရောက်ရန် အတွက် နာမည်ရိုက်ထည့်ရန် ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေဖြင့် User Names (၅) ယောက်စာ သတ်မှတ် ပေးထားနိုင်သော်လည်း Installation ပြီးဆုံး သွားတဲ့အခါမှာလည်း ထပ်မံ၍ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ထို့ကြောင့် Your name အကွက်ထဲမှာ သင်နှစ်သက်ရာ အမည်တစ်ခုခုကို ရိုက်ထည့်ပေးပြီး Next ကို Click ထပ်မံ၍ နှိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ထိုအခါ အောက်ဘက်ပုံပါအတိုင်း Thank you ပေါ်လာတဲ့အခါ Windows XP Installation လုပ်ငန်းစဉ်ကြီး ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ Finish မှာ Click ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
Welcome Screen နှင့်အတူ Windows XP စတက်လာပါပြီ။
ယခုဆိုရင် Windows XP ရဲ့ Desktop ထဲကို ရောက်ရှိသွားပါပြီ။ Desktop ဆိုတာ Windows တက်လာရင် ပထမဆုံး အသုံးပြုသူထိတွေ့ရမယ့် Interface ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Desktop ဟာ အောက်ဆုံးအလွှာပါပဲ။ ဘာတွေပဲ ပေါ်ပေါ် သူ့အပေါ်မှာပဲ ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် Windows XP Installation ကို အလွယ်တကူနဲ့ ပြုလုပ်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ဦးအေးကိုကို (FEB Computer Centre)
(လက်တွေ့အသုံးချ ကွန်ပျူတာပြုပြင်ခြင်းအခြေခံနည်းစနစ်နှင့် တကယ့်လက်တွေ့ပြုပြင်ခြင်း မှတ်တမ်းများ- တတိယတွဲ)
(A+ Certification Exam ကွန်ပျူတာအကြောင်း အသေးစိတ်သိစရာ)
( ကွန်ပျူတာတပ်ဆင်ပြုပြင်ထိန်းသိန်းခြင်း အခြေခံ သဘောတရားများ)
Posted by kmo at 1:13 AM No comments:
Labels: ၀င်းဒိုး(စ်) တင်နည်း, Windows XP
ကွန်ပျူတာကို Format ချလိုက်မိခြင်း၊ Virus ကိုက်ခြင်း၊ Power (သို့) Software အမှားများ စသည်တို့ကြောင့် ၎င်း၊ ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ data များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု ရှိနိုင်ပါသည်။ Recovery ဟူသော ဝေါဟာရသည် ပျောက်ဆုံးနေသော (သို့) ပျက်စီးနေသော ဖိုင်များကို ပြန်လည်ရယူနိုင် သော restore ပြလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖော်ပြရန်အတွက် အများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ဖိုင်များကို နည်းလမ်း နှစ်သွယ်ဖြင့် recover လုပ်နိုင်သည်။ Undeleting ဖိုင်တစ်ခုကို Delete လုပ်သည့်အခါ ပကတိဖိုင်တွင် ပါဝင် သည့် အကြောင်းအရာများမှာ disk ပေါ်တွင် ကျန်ရှိနေတတ်သည်။ ယင်းကို ဖော်ပြခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် နာမည် ကိုသာပြောင်းလဲထားသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် ဖိုင်သည် ထိုနေရာတွင်ရှိသော်လည်း ဖိုင်ကို မမြင်နိုင်ပေ။ Delete လုပ်ထားသော ဖိုင်ထဲတွင်ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများပေါ်သို့ အခြားသော ဖိုင်တစ်ခုကို ထပ်၍ သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုသမျှ PC Tools (သို့) Norton Utilities ကဲ့သို့သော အထူးပြု ပရိုဂရမ်တစ်မျိုးကို အသုံးပြုပြီး ဖိုင်ကို Undeleted လုပ်နိုင်ပါသေးသည်။ ယင်းတို့အနက် လွယ်ကူကောင်းမွန်သော software တစ်ခုခုကို ညွှန်းပါ ဆိုလျှင် GetDataBack ကို ညွှန်းရပါလိမ့်မည်။
GetDataBack FAT & NTFS 3.03.17
GetDataBack for FAT V3.03.17
GetDataBack for NTFS V3.03.17
More download: http://www.runtime.org/
Posted by kmo at 2:24 AM No comments:
Most of them are working well. I have tested. Enjoy!
*3370# Activate Enhanced Full Rate Codec (EFR) -
Your phone uses the best sound quality but talk time is reduced.
*#4720# Activate Half Rate Codec -
Your phone usesalower quality sound but you should gain approx 30% more Talk Time
1st Line : Software Version, 2nd Line : Software Release Date, 3rd Line : Compression Type
*#746025625# (or: *#SIM0CLOCK#) Displays the SIM Clock status, if your phone supports this power saving feature "SIM Clock Stop Allowed", it means you will get the best standby time possible
*#92702689# (or: *#WAR0ANTY#) Displays - 1.Serial Number, 2.Date Made, 3.Purchase Date, 4.Date of last repair (0000 for no repairs), 5.Transfer User Data. To exit this mode you need to switch your phone off then on again
Gotch them from metacafe.
Source of http://www.myanmarnavy.com
Posted by kmo at 1:50 AM No comments:
Labels: Nokia Secret Codes
ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို Format ချပြီး Windows Installation ပြန်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ Sound Driver, Graphic Driver အစရှိတဲ့ ယခင်စက်တစ်ခုလုံးမှာ တင်ထားပြီးတဲ့ Driver များအားလုံးကို ရှာဖွေပြီး ပြန်တင်ပေး ရတာကလည်း အလုပ်တစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလို ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ရာ ကွန်ပျူတာအတွင်းမှာ ယခင်တင်ထားပြီးသား Driver အားလုံးကို Backup အရင်လုပ်ထားရပါမယ်။ ပြီးမှ Windows တင်ပြီးတာနဲ့ Backup လုပ်ထားတဲ့ Driver အားလုံးကို Restore ပြန်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Driver Backup လုပ်ဖို့ရာ Software များစွာရှိတဲ့အထဲက ပိုပြီးလွယ်ကူလျင်မြန်တဲ့ Program လေး ကတော့ Driver Magician ဆိုတဲ့ Software လေးတစ်ခုပါပဲ။
Download Here: Driver Magician 3.26
More details: http://www.drivermagician.com/
Posted by kmo at 12:51 AM No comments:
Labels: Softwares, Softwares Review